URichard unezimvo eziyi-607 zezinye iindawo.
Ikhaya elikhulu leeGumbi zokulala ezi-5-iBella Toscana
5 igumbi lokulala / indawo yokulala eyi-10
Ikhaya elikhulu lokulala eli-5 kwindawo ebekwe kakuhle yaseBella Toscana. Ngegumbi lemidlalo, indawo yokomelela kunye nephuli yabucala, kukho yonke into onokuyidinga ngeholide efanelekileyo.
Zimbini iindawo zokuhlala ezineesofa ezikhululekileyo ezibonelela ngendawo eninzi yokuba abantu abadala kunye nabantwana baphumle. Kwindawo yokuhlala ephambili kukho iscreen esikhulu seTV. Ecaleni koku kukho indawo yokomelela enoomatshini bokwenza umthambo, kunye nedesika yeofisi kunye nesitulo. Isantya esiphezulu se-wifi kunye neefowuni zesizwe zibandakanyiwe.
Ikhitshi lilinganiswe ngesisa kunye nezixhobo eziphezulu zokulungiselela iqela lakho. Kukho indawo yokuhlala yasekuseni kunye negumbi lokutyela elisemthethweni.
Ngaphandle, idama lijikeleza ngasemva kwekhaya nge-spa eshushu. Kukho izihlalo ezininzi zokuchitha usuku ukonwabela ukukhanya kwelanga eFlorida. Iindwendwe nazo zinokuyonwabela i-BBQ yegesi kunye nentshayi. Nceda ubuze ukuba uyafunwa na ubushushu be-spa.
Igumbi lokulala elikhulu elikhulu linebhedi enkulu, i-ensuite eneshawa kunye nebhafu, kunye ne-walk-in-wardrobe. Kukho amagumbi amabini okumkanikazi aqaqambileyo kunye namagumbi amabini angamawele aza kuthandwa ngabantwana-igumbi lenkosazana elinye kunye negumbi elinye lesigcawu. Iitawuli ezikumgangatho ophezulu kunye neelinen zinikezelwa.
Igumbi lemidlalo linetafile yepool kunye netafile yehoki yomoya, ebonelela ngeeyure zokuzonwabisa.
IBella Toscana yindawo ezolileyo yamakhaya amakhulu abekwe kude noRonald Reagan Pkwy. Ngokufikelela ngokulula kwi-Hwy 27 kunye ne-I4, ukufutshane nazo zonke iindawo ezinomtsalane- malunga nemizuzu eli-15 ukuya kwiDisney kunye nemizuzu engama-30 ukuya kwi-Universal.
Le ndawo ilawulwa ngokusemthethweni yiFairways Florida Villas. Isekwe ngaphezulu kweminyaka eli-14, silishishini eliqhutywa lusapho ligxile kumava ondwendwe aphezulu. Iofisi yethu ifumaneka ngokulula kwimizuzu nje ukusuka kweli khaya.